यी हुन् 'उत्कृष्ट अनलाईन विज्ञापनदाता कम्पनीहरु' Best online advertising agency | मेरो कलम
– अनलाईन विज्ञापनको महत्व धेरै नै छ । अनलाईन विज्ञापन एजेन्सी मार्फत गरिएको प्रचार प्रसार छिनभरमै विश्व व्यापी भईरहेको हुन्छ । यसै कारणले पनी संकलिन विज्ञापनहरु Ads Agency ले विश्वका व्लग बेवसाईटमा राख्ने अनुमती दिईरहेका हुन्छन् त्यस्तै उनीहरुले विज्ञापन राखिदिएवापत निश्चित मापदण्डमा पैसा पनी भुक्तानी गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
व्लग तथा बेवसाईटमा काम गरिरहदा अनलाईन विज्ञापन राखेर पैसा कमाई गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कसलाई लाग्दैन होला र ? आफ्नो व्लग/बेवसाईटलाई निरन्तरता दिन सकिने र अदृष्य कमाई पनि हुने हुदा दुई काम एक पन्तोको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । कुन-कुन अनलाईन विज्ञापन दाता कम्पनीको विज्ञापन व्लग बेवसाईटमा राख्न सक्छौ त ?
– यो गुगलको विज्ञापन दाता कम्पनी हो । विश्वमा सवैभन्दा वढी व्लग बेवसाईटमा AdSense कम्पनीले उपलव्ध गराउने विज्ञापन राखिएको पाईन्छ । गुगलको टर्म एण्ट पोलिशीमा रहेर काम गरेको खण्डमा व्लग बेवसाईट युट्युव लगायतवाट निरन्तर राम्रो कमाई गर्न सकिन्छ । विश्वको सवैभन्दा ठुलो विज्ञापन दाता कम्पनीको रुपमा हामी AdSense लाई वुझ्न सक्छौ । एड्सेन्सले कम्तीमा सय डल्लर भएपछि मात्रै रकम उपलव्ध गराउछ । नेपालमा एड्सेन्स एकाउण्टको पैसा Western Union को माध्यमवाट निकाल्न सकिन्छ । अग्रेजी एवं गुगलले भेरिफाई गरेको भाषाका कन्टेन्टवाट मात्रै AdSense एप्रुभ गराउनु सक्छौ भने एप्रुभ भईसकेपछि जुनसुकै भाषाको कन्टेन्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
– BuySellAds गुगल Adsense जत्तिकै महत्व राख्ने Ads एजेन्सी हो । वाईसेल एड्ले तपाईको व्लग बेवसाईटको स्पेस किनेर आफ्ना विज्ञापनहरु ती साईटमा राख्ने काम गर्दछ । अर्को महत्वपुर्ण पक्ष, BuySellAds राख्नको लागी अधिक मात्रामा भिजिटर हुन भने जरुरी छ । तर फाईदा पनी के छ भने Google Adsense ले एकै मापदण्डमा डलर उपलव्ध गराउदैन तर BuySellAds ले भने दैनिक एकै दररेटमा उपलव्ध गराउने काम गर्दछ । जागिरे कर्मचारीको तलव पाकेको जस्तो । BuySellAds को विज्ञापन राख्नको लागी आफ्नो साईटको कन्टेन्ट अग्रेजी भाषा हुन भने जरुरी छ । ईजरायलवाट व्लगिङ गरिरहेका ज्ञानु वस्नेत भन्छन् Google Adsense भन्दा BuySellAds निकै प्रभावकारी विज्ञापन दाता कम्पनी हो । धेरै भिजिटर भएको साईटमा एड्सेन्सभन्दा राम्रो र स्थाई रुपमा कमाई गर्न सकिन्छ ।
यो माईक्रोसफ्टको सर्च ईन्जिन Bing र सर्च ईन्जिन Yahoo को नेटवर्क Ads एजेन्सी कम्पनी हो । YahooBing Ads को विज्ञापन राख्नको लागी अग्रेजी कन्टेन्ट अनिवार्य रहेको छ । यसको विज्ञापन राख्दा राम्रै कमाई हुने गरेको व्लगरहरु वताउछन् । एक हजार ईम्प्रेसन भएको खण्डमा दुई स्वतः दुई डलर र अन्यवाट अरु कमाई गर्न सकिने पोखराका व्लगर विष्णु सुवेदी वताउछन् । उनले YahooBing Ads को विज्ञापन प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । न्युनतम सय डल्लर भएपछि भने PayPal वा चेकको माध्यमवाट पैसा निकाल्न सकिन्छ ।
Bidvertiser यो लाई आकर्षक विज्ञापन दाता कम्पनीको रुपमा चिनिन्छ । “Pay per click” को अफरमा यसले टेक्स्ट तथा फोटोका विज्ञापन उपलव्ध गराउने काम गर्दछ । अधिक भिजिटर भएको साईटमा यसको विज्ञापनले धेरै महत्व राख्दछ । नेपाली हेडलाइन्स डटकमका पत्रकार अभिज्ञ शर्माले केहि महिना अघि Bidvertiser कै विज्ञापन प्रयोग गरेको थिए । उनी भन्छन् “राम्रो भिजिटर हुने साईटको लागी भने प्रभावकारी नै छ ।” न्युनतम १० डल्लरवाटै Bidvertiser ले PayPal एकाउण्टमा डलर पठाउने काम गर्दछ ।
– यो विज्ञापनदाता कम्पनी निकै पुरानो हो । सन् २००३ मा स्थापना भएको Chitika ले “Pay per click” को नारालाई अघाडी वढाएको छ । नाफामै गईरहेको यो चिट्का कम्पनीले गुगलको एड्सेन्स सो सरह नै भुक्तानी गरिरहेको वताईन्छ । व्लगको लागी चिट्काको विज्ञापन प्रभावकारी मानिन्छ । यसले PayPal मा हो भने १० डल्लरवाटै र चेकवाट हो भने ५० डलरवाट भुक्तानी गर्न सुरु गर्दछ ।
अनलाईन विज्ञापन दाता कम्पनीहरु यतिमात्रै छैनन । अरु विज्ञापनदाता कम्पनीहरु छन् :
Smooth Heart April 22, 2013 Log in to Reply
धन्यबाद सर 🙂 मलाई त bid र adsense मात्र थाहा थियो 🙂
Bishnu Subedi April 22, 2013 Log in to Reply
पछिल्लो समय अलि चर्चा बटुलेको अनलाइन विज्ञापन प्रदायक http://madadsmedia.com/ पनि हो, यसले Adsense कै ढाँचामा विज्ञापनहरु प्रदान गर्दछ । तर CPM Rate भने निकै कम छ ।
Pawan Paudel April 22, 2013 Log in to Reply
यहाँ राखिएका १५ वटा अनलाइन विज्ञापन दिने कम्पनीमध्धे आफूलाई त ४÷५ वटा मात्र थाहा रहेछ । प्रयोग भने अहिलेसम्म गुगलको विज्ञापन बाहेक अरु कुनै पनि गरिएको छै्रन । एकचोटी ४ देखि ५ वटै प्रयोग गरेर हेर्नुपर्यो । एउटा न एउटा मा त कसो क्लिक नहोला । 🙂
एकैचोटी चार/पाँच वटा राख्दा चै गुगलको 'टर्म एण्ड कण्डिसन'मा धक्का पो लाग्ने हो कि ?
SB Gautam April 22, 2013 Log in to Reply
एकै पटक धेरै राखियो भने चै पक्कै असर गर्छ । देखेजती सवै खान्छु भन्नुभएनै है गुरु..:)
प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा हजुरलाई पनी धन्यवाद ।
ए होर ? ल त्यसो भए यो http://madadsmedia.com/ पनी यहि व्लग लिष्टमा थपिए सो सरह भयो विष्णु सर 🙂
खै कता पो हो ! Yahoo ra Google ko बिज्ञापन एकै ठाउँ मा देखिएको थियो ! POKHARATECH त होइन नि त्यो 😛
Bishnu Subedi April 23, 2013 Log in to Reply
तपाइ पनि झुक्किनेहरुमध्ये पर्नुभएछ :P…त्यो त मैले अप्रिल-फुल मनाउन Madadsmedia बाटै राखेको विज्ञापन हो !!
Surya Gc April 23, 2013 Log in to Reply
Bishnu sir maile google adsense ko blog kholeko thiye 1/2 din ta khuleko thiyo tra pa6i kata harayo kunni tha bhayen blank matra aayeko6.khole ko pani dherai bhayeko 6in.k bhayeko hola sir?
Bishnu Subedi April 25, 2013 Log in to Reply
Hajurko question ramro sanga bujina maile, hajurle Google adsense ko official blog kholnu bhayeko ho? adsense ko official blog http://adsense.blogspot.com/ ho, yedi tapaile blogger.com bata blog kholnu bhayo ra kei din ma blank dekhayo bhane hajurko blog link dinus, ma check garchhu !
Smooth Heart June 5, 2013 Log in to Reply
😀 मलाई .कम मा एड राखेर एप्रुभ गर्न कसले सहयोग गर्छ होला ?
होस्ट एकाउन्ट भएर होला ब्लगस्पटमा मात्र एड देखाउछ 🙁
manorath aryal June 5, 2013 Log in to Reply
मैले सुनेको गुगल ले नेपाली बल्ग लाइ गुगल एड दिन खोज्दैन रे अरु देस को बल्ग जस्तो । कति भिजिटर भयो भने गुगल ले दिन्छ एड ? मैलै एप्लाइ गरेको एक हप्ता भो तर अहिले सम्म एपरोभ गरेको छैन